Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Hospitality, Hotels အလုပ်အကိုင်များ
ဟိုတယ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု Jobs in Myanmar
ဟိုတယ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု အလုပ် 42 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ရန်ကုန်၊မန္တလေးရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဟိုတယ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများကို Alote Myanmar တွင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေလျှောက်ထားလိုက်ပါ။
အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူ ဖြစ်ရမည် ဟိုတယ်သင်တန်းဆင်းများနှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁နှစ်အထက်ရှိ၍ ရိုးသားကြိုးစားသူ ဖြစ်ရမည်
- Day/Night အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ရိုးသားကြိုးစားပြီးဧည့်သည်များအပေါ်စိတ်ရှည်သူဖြစ်ရမည်။
ဟိုတယ်ဧည့်ကြို | Bell Boy
- English Speakingအသင့်အတင့်ပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၆ လ အထက်ရှိရမည်။ - Team work ဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
- စာရင်းကိုင်နယ်ပယ်တွင် လုပ်သက်အနည်းဆုံး (3နှစ်) ရှိသူဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သောသူဖြစ်ရမည်။ - ရုံးသုံး softwareများကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
ဧည့်ကြို | Front Office, Guest Relations
English ကောင်းရမည် Computer (မြန်မာနှင့် အဂ်လိပ်) ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးနိုင်ရမည်။
- Computer - Word , Excel , Internet , Email , ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ရမည်။ - English Speaking ကောင်းမွန်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။ - အသက် ( ၂၅ မှ ၃၀ ) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - Team work ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Cost Control Supervisor/ Assistant Manager
- The Cost Supervisor should receive from the Receiving the following documents onadaily basis: (a)Receiving report (b)Original delivery Note and/or invoices from suppliers (c)Purchase order form - The receiving report must be attached with each purchase order and original invoice/delivery Note which signed by the Receiver and the relevant department. - The Cost Control Supervisor must check unit costs on the invoices with approved purchase orders and price listings (for market list items) provided by the purchasing department. - Any variances between the quoted price on the purchase order and the received price on the daily receiving report must be investigated and any quantities received in excess of those ordered must be investigated. - Once verified, all documents will be sent together to Account Payable for payment. - Each of user department/Store will need to prepare daily bar inventory and send to Cost Control by Daily basis - Cost supervisor will count the monthly physical inventory taking for the hotel materials(Food & Beverage and General Store). - Cost supervisor must check daily requisitions and materials transferred between kitchens & Bar by MC System.. - Cost supervisor help to cost controller for the standard recipes for menu by MC system. - Cost supervisor will be prepare for monthly OC& ENT Report.
အကျိုးအမြတ်: - Meal provided - Ferry provided - Annual Bonus
• အသားငါးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုကောင်းမွန်စွာစီမံနိုင်ရမည်။ • အသင်းအဖွဲနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ရမည်။ • အသောက်အစား ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ • ဓါးကိုင်လုပ်သက် အနည်းဆုံး ၁ နှစ်
- ဝန်ထမ်းဟင်းများကို ချက်ပြုတ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ - ဗမာထမင်းဟင်းကောင်းမွန်စွာချက်ပြုတ်နိုင်ရမည်။ - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ - လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
တရုတ်/ထိုင်း/ရခိုင်/အကင်/အထောင်း/အသုတ်/hot pot များလုပ်နိုင်ရမည်။ စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းတွင်အကြော်ဆရာလုပ်ဖူးသူများ ဖြစ်ရမည်။ အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ အသောက်အစားကင်းစင်သူဖြစ်ရမည်။
ညောင်ဦး | မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်/ Technician(Kitchen & Laundry)
အထက်ဖော်ပြပါရာထူး နှင့် ပက်သက်၍ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည် Technician ( Engineering ) နှင့် ပက်သက်ပြီး ဗဟုသုတ/အတွေ့အကြုံရှိရမည်၊ 4th November 2021 နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ရမည်။
M& E Staff
သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ အဆောင်နေနိုင်ရမည်။
ဝိတ်တာ/Waiter ( Lobby Lounge )
ဟိုတယ်အကူ | Hotel Operations
အထက်ဖော်ပြပါရာထူး နှင့် ပက်သက်၍ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည် F & B နှင့် ပက်သက်ပြီး ဗဟုသုတ/အတွေ့အကြုံရှိရမည်၊ 4th November 2021 နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ရမည်။
Room/PA Attendant - Casual
အထက်ဖော်ပြပါရာထူး နှင့် ပက်သက်၍ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည် Room Attendant နှင့် ပက်သက်ပြီး ဗဟုသုတ/အတွေ့အကြုံရှိရမည်၊ 4th November 2021 နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ရမည်။
အခြေခံပညာအထက်တန်းနှင့်အထက် လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ အနည်းဆုံး ၁နှစ် M&E knowledge အနည်းငယ်ရှိရမည်။ အဆောင်နေနိုင်ရမည်။
-Computer Excel ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရပါမည်။ -Receivable နှင့်ပတ်သက်သောအပိုင်းကို ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရပါမည်။ -စကားပြောချိုသာ၍ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ -ရိုးသားကြိုးစားပြီးသင်ယူလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ -English စကားအသင့်တင့်ပြောဆိုတတ်ရမည်။ -ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာနိုင်ရမည်။ - လစာ ညှိနှိုင်း
ဝိတ်ထရတ်စ် /Waitress ( All Day Dining)
- အဝတ်လျှော်ဌာန၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ - ခြွင်းချက်မှန်သမျှကို ပယ်ချပြီး လျှော်ဖွပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးအတွက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများကို သေချာအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ - အဝတ်လျှော်ဧရိယာကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်အောင် ထိန်းသိမ်းခြင်း။ - အ၀တ်လျှော်အဖွဲ့ကို ပို၍developဖြစ်အောင် လေ့ကျင့် အကဲဖြတ်ပေးခြင်း။ - Business and Events မျာအတွက် linen and housekeeping supplies ordered ပစ္စည်းများကို သေချာထိန်းချုပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ - Stock ယူဆောင်ခြင်း Stock receiptများကို လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းခြင်း။ - Customer Service ပြဿနာများကို လျင်မြန်ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ - အဖွဲ့၀င်များအားလုံး ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာစေခြင်း။ - ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုမှ ချမှတ်ထားသော အခြားသော ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Uniform, Meal
-တရုတ်အစားအစာ၊ယိုးဒယားအစားအစာ မြန်မာဟင်းမျိုးစုံ(အစားအစာ)တိုကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ချက်ပြုတ်နိုင်ရမည်။ -ဟိုတယ်ကြီး အဆင့်မှီ ချက်ပြုတ်နိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။ -Special Menus များ၊ပွဲများအတွက် စီစဉ်ချက်ပြုတ်တက်ရမည်။ -Day/Night အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ -အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။
ဝိတ်ထရတ်စ် /Waitress ( Lobby Lounge )